ဘယ်သူ့ကိုမှ ထပ်မချစ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ် – Shinyoon
ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင် လူတစ်ယောက်ကို ကျွန်မ နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခဲ့ပြီးသွားပြီလေ … ပြီးတော့ အချိန်တွေအကြာကြီး နာကျင်ခဲ့ရပြီးပြီ နောက်ထပ် ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ပဲ ထပ်မချစ်ဖြစ်ဖို့များတယ် ။
အချစ်ကို ကြောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာထက် ချစ်တယ်လို့ပြောတတ်တဲ့လူတွေကို မယုံရဲတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ပိုပြီးမှန်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် … တချို့လူတွေက ချစ်တယ်လို့ပဲပြောတတ်တာလေ အနောက်မှာ ဂရုမစိုက်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေ များတယ် ။
အစကတော့ သိပ်ကိုချစ်တတ်ခဲ့ပြီး ကိုယ့်အချစ်တွေကို ရသွားတဲ့အခါမှ မချစ်ပြတတ်တော့တဲ့လူ ဖြစ်သွားတတ်တာကလဲ အများကြီးပဲ ။ မချစ်ပြတတ်လို့ပါဆိုပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့အရာတွေကို လျစ်လျူရှုထားခဲ့ပြီး သူက ပစ်ထားဖို့ပဲ တွေးတာလေ ။ တကယ်တော့ မချစ်ပြတတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး တကယ်ကို မချစ်ခဲ့တာပါ
အသည်းကွဲခဲ့ဖူးတယ် .. အနာဂတ်တွေထိမြဲမယ်လို့ထင်တဲ့လက်တွေပြိုပျက်သွားတဲ့အချိန် ကျွန်မတို့အိပ်မက်တွေကလဲ ပြိုခဲ့ရဖူးတယ် အတူတူဆိုပြီး မက်ခဲ့ကြတာလေ နောက်ဆုံးကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေခဲ့တဲ့အခါ ကိုယ်မှာ တစ်ယောက်တည်း လမ်းတွေပျောက်ရတယ်
တကယ်ပါ … ထပ်မချစ်ဖြစ်ဖို့များတယ် … ဘာကြောင့်ဆို အဲ့ဒီနေ့တွေတုန်းက အကြောင်းပြချက်မရှိ ငိုနေမိတဲ့မျက်လုံးတွေကို လဲ တဖြေးဖြေးမုန်းမိလာသလို ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မထိန်းနိုင်ပဲ တွေးနေ ဆွေးနေမိတာတွေကို လဲ မုန်းလာတယ် …. ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ပဲ တွေးတယ် ဘယ်သူ့ကိုမှ ထပ်မချစ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ် ။
ဘာေၾကာင့္လဲလုိ့ေမးရင္ လူတစ္ေယာက္ကို ကြ်န္မ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခ်စ္ခဲ့ျပီးသြားျပီေလ … ျပီးေတာ့ အခ်ိန္ေတြအၾကာၾကီး နာက်င္ခဲ့ရျပီးျပီ ေနာက္ထပ္ ခံနုိင္ရည္မရွိေတာ့ဘူးလုိ့ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ထင္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ပဲ ထပ္မခ်စ္ျဖစ္ဖို့မ်ားတယ္ ။
အခ်စ္ကို ေၾကာက္သြားခဲ့တယ္ဆိုတာထက္ ခ်စ္တယ္လို့ေျပာတတ္တဲ့လူေတြကုိ မယံုရဲေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ပိုျပီးမွန္္လိမ့္မယ္လို ့ထင္ပါတယ္ … တခ်ိဳ႕လူေတြက ခ်စ္တယ္လို ့ပဲေျပာတတ္တာေလ အေနာက္မွာ ဂရုမစိုက္တတ္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ မ်ားတယ္ ။
အစကေတာ့ သိပ္ကိုခ်စ္တတ္ခဲ့ျပီး ကိုယ့္အခ်စ္ေတြကို ရသြားတဲ့အခါမွ မခ်စ္ျပတတ္ေတာ့တဲ့လူ ျဖစ္သြားတတ္တာကလဲ အမ်ားၾကီးပဲ ။ မခ်စ္ျပတတ္လို့ပါဆိုျပီး ကုိယ္ခ်စ္တဲ့အရာေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ျပီး သူက ပစ္ထားဖို့ပဲ ေတြးတာေလ ။ တကယ္ေတာ့ မခ်စ္ျပတတ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး တကယ္ကို မခ်စ္ခဲ့တာပါ
အသည္းကြဲခဲ့ဖူးတယ္ .. အနာဂတ္ေတြထိျမဲမယ္လို့ထင္တဲ့လက္ေတြျပိဳပ်က္သြားတဲ့အခ်ိန္ ကြ်န္မတို့အိပ္မက္ေတြကလဲ ျပိဳခဲ့ရဖူးတယ္ အတူတူဆိုျပီး မက္ခဲ့ၾကတာေလ ေနာက္ဆံုးကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း က်န္ေနခဲ့တဲ့အခါ ကိုယ္မွာ တစ္ေယာက္တည္း လမ္းေတြေပ်ာက္ရတယ္
တကယ္ပါ … ထပ္မခ်စ္ျဖစ္ဖို့မ်ားတယ္ … ဘာေၾကာင့္ဆို အဲ့ဒီေန့ေတြတုန္းက အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ ငိုေနမိတဲ့မ်က္လံုးေတြကို လဲ တေျဖးေျဖးမုန္းမိလာသလို ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္မထိန္းနိုင္ပဲ ေတြးေန ေဆြးေနမိတာေတြကို လဲ မုန္းလာတယ္ …. ကိုယ့္စိတ္နဲ႕ကိုယ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ဖို့ပဲ ေတြးတယ္ ဘယ္သူ့ကိုမွ ထပ္မခ်စ္ျဖစ္ဖို့မ်ားပါတယ္ ။